Ini handisi kuenda kuBarnes neNobles Nhasi! | Martech Zone
Ini handisi kuenda kuBarnes neNobles Nhasi!
Mugovera, Kubvumbi 19, 2008 Mugovera, Kubvumbi 19, 2008 Douglas Karr
Vakavaka Barnes naNobles mukati mamaira mashoma kubva kumba kwangu uye chaicho chitoro chinoshamisa. Ndinoita senge ndinogara ndine nguva yakaoma kuwana mabhuku angu imomo, zvakadaro. Miganhu inoita kunge ine nzira dzakaperera pakuronga masherufu avo.
Zvisinei, ini ndinonakidzwa chaizvo nezvitoro zvese asi ini ndakazviwana ndiri paBarnes neNobles kazhinji nekuti vane Starbucks iyo ine Wireless neAT&T. Ini handisati ndamboenda kuBorder kwenguva - ndinovimba vane mukana wekuwana kunze kweT-Mobile futi.
Chero zvakadaro - ini ndiri bookhound uye odha mabhuku nguva dzose kubva kuBarnes neNobles (uye Amazon) asi maBorder chete ndiwo akarangarira zvazviri nhasi:
Iyo Border yakatora nguva kugadzira email yakanaka seiyi uye NDITUMire ini coupon ye25% off inotonhorera uye haizokanganwi neni. Zvinoita sekunge Miganhu inogona kunge iri kurasikirwa nehondo kuBarnes neNobles - asi, parutivi nenzvimbo iri nyore, handina chokwadi kuti sei.
Nenzira, ini ndiri mukuru 4-0 nhasi! Woohoo!
Tags: Brand Kuongororagoregore kadambaricloudcampnhoroondokuvaka kwechikwata
Cisco I-Mubayiro Telepresence: Chivabvu 6
Pfungwa Dzako Ndedzedu
Apr 19, 2008 pa 8: 12 AM
hoppy shiri zuva maviri nhunzvi
hoppy shiri zuva rinodiwa Doug
Apr 19, 2008 pa 9: 07 AM
Bhavhadhe rinofadza Doug.
Apr 19, 2008 pa 3: 37 PM
Bhavhadhe rinofadza kwauri, Doug!
(ane makore makumi matatu nemapfumbamwe, ini pachangu)
Apr 19, 2008 pa 8: 38 PM
Bhavhadhe rinofadza. Doug.
Apr 20, 2008 pa 8: 35 AM
Bhavhadhe rinofadza! Pave nenguva… ngatitorei pamusoro kofi!
Apr 20, 2008 pa 10: 04 AM
Bhavhadhe rinofadza Doug… wakangondibata (asi ndichaenda pamberi munaGunyana). 🙂
Apr 20, 2008 pa 4: 54 PM
Bhavhadhe rinofadza Doug!
Ndinovimba kuti iwe unowana chimwe chinhu chikuru kushandisa coupon yako pa.
Apr 21, 2008 pa 7: 18 AM
Bhavhadhe rinofadza rakacherwa, uye ndakavawo nezuva rekuzvarwa mazuva maviri apfuura
Apr 21, 2008 pa 7: 46 AM
Apr 22, 2008 pa 12: 36 AM
Bhavhadhe rinofadza Doug! Mamwe simba kwauri!
May 9, 2008 pa 6: 43 AM
Bhavhadhe rinofadza uye zuva rekuzvarwa rinofadza kwauri Kartenlegen futi